मानसरोवर तीर्थाटनको गन्तब्य | langtangnews.com
Posted By: Hemnath Khatiwada September 4, 2018
तिब्बतमा रहेको मानसरोवर ताल हिन्दु र बुद्ध धर्मको तीर्थाटनको गन्तब्य हो । यो ताललाई संस्कृत भाषामा मानसरोवर र तिब्बती भाषामा मापाम युम शो नामले चिनिन्छ । मानसरोवर समुन्द्र सतहबाट करिब चार हजार पाचँसय ९० मिटरको उचाईमा रहेको छ । मानसरोवर ताल तिब्बतको ल्हासाबाट ९सय४० किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ । मानसरोवर तालको पश्चिममा राक्षस ताल रहेको छ भने उत्तरमा कैलास पर्वत पर्दछ ।
ब्रम्हपुत्र नदी, सिन्धु, सतजल तथा कर्णाली नदीको मुहान मानसरोवर नै हो । कैलास पर्वतको परिधि ४३ कि.मि.पर्दछ । कैलास पर्वतको उचाई छ हजार सातसय १४ मिटर रहेको छ । पौराणिक कथन अनुसार शिवबाहेक ब्रह्मा, देवगण मरिचि, रावण, भस्माशुर आदिले यहाँ तपस्या गरेका थिए । यस स्थलमा ब्यास, भीम, कृष्ण,दत्तात्रय आदिले यात्रा गरेका थिए । भनिन्छ शंकराचार्यले यही प्राण त्यागेका थिए । मेरु सुमेरु, सुषुम्ना, हेमाद्री, देवगण आदि पर्वतले सुसज्जित मानसरोवर पर्वत प्राकृतिक छटाको भण्डार हो । यो पर्वत हिन्दुहरु, बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्मावलम्बीहरुको साझा तपोभूमि पनि हो ।
दत्तातय ऋषि हिमालय घुम्न जाँदा हिमालयले उनलाई ब्रम्हाद्वारा निर्मित मानसरोवरको दर्शन गराएर त्यसको महत्व बारे बताएका थिए । त्यस स्थानमा ऋषिहरुको आश्रम पनि थियो । भगवान शिव स्वयं राजहंस भएर मानसरोवरमा जलपरिक्रमा गरिरहने विश्वास गरिन्छ । यस सरोवरमा सबै देवताहरु ब्राम्हमुहर्तमा स्नानका लागि आउने गर्छन भन्ने विश्वास गरिन्छ । मानसरोवर करिव चार हजार स्क्वायर कि.मी.क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । मानसरोवरको ब्याख्या स्कन्दपुराणमा उल्लेख छ । मानसरोवरमा सतीदेबीको दाँया हात खसेको हुँदा त्यहाँ रहेको शीलालाई उनको रुप मानी पूजा गरिन्छ । यो एक शक्ति पिठ पनि हो ।
तीर्थाटनमा जाने मानिसहरु मानसरोवर पुगेपछि कैलास पर्वतको परिक्रमा गर्दछन । परिक्रमा गर्दा पैदल हिडन नसक्नेहरुको लागि घोडाको व्यवस्था पनि छ । यात्राको १४ कि.मी.पार गरेपछि चार हजार नौसय १० मिटर उचाईको देरापोक पुगिन्छ । त्यहाँबाट कैलासको साक्षात दर्शन गर्न सकिन्छ । तीर्थाटनका मानिसहरु को लागि त्यहा गेस्ट हाउसको पनि व्यवस्था छ । कैलास पर्वतको पूरा परिक्रमा पछि अष्टपर्वतको परिक्रमा शुरु हुन्छ । कैलासको दक्षिण मोहडाबाट उकालो चढी माथी डाडामा पुगिन्छ र त्यहाँबाट पनि कैलास पर्वतको राम्रो दर्शन गर्न सकिन्छ ।
कैलास मानसरोवरमा बार्षिक ५० हजार भन्दा बढी यात्रुहरु नेपाल, भारत, भुटान, भियतनाम, रुस लगायतका देशहरुबाट जाने गर्छन । जसमा भारतीय यात्रुहरु सबैभन्दा बढी हुन्छन । मानसरोवरको यात्रामा अत्यन्त ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के छ केहि मानिसहरुलाई अक्सिजनको अभाव हुन पनि सक्दछ । स्वर्णभूमिमा पुग्दा जता हेर्दा पनि शान्त देखिन्छ । अनन्त लाग्ने तालको पानी कञ्चन देखिन्छ । मानसरोवर ताल ८० कि.मी.गोलो छ । पैदल हिँडदा ३ दिन लाग्दछ भने गाडीमा साढे एक घण्टामा परिक्रमा गर्न सकिन्छ । ६० मिटर गहिरो मानसरोवरको लम्बाई र चौडाइ ठीक २० किलोमिटर रहेको छ । मानसरोवर कैलाश पर्वतबाट शुरु भएका प्रसिद्ध चार नदी सिन्धु अर्थात संगे खाबाब, सतलज अर्थात गंगा, कर्णाली म्याप्च्या खाँबाब र बह्मपुत्र यार्लुङ साङबो अर्थात ताम्छो खाम्बाब नदीको छेउछाउमा विकास भएको सभ्यताको भारी महत्व रहेको छ । जुन कारणले गर्दा कैलाश मानसरोवर स्वर्गीय तीर्थस्थल बनेको छ ।
ब्रह्मपुत्र एसिया महादेशका ठूला नदीहरु मध्येको एउटा हो । संस्कृत मा ब्रह्मपुत्रको शाब्दिक अर्थ ब्रह्माको पुत्र हुन्छ । यो नदी तिब्बत, भारत तथा बंगलादेश हुँदै बग्दछ । ब्रह्मपुत्र को उदगमस्थल चीनको स्वायत्त शासित प्रदेश तिब्बतको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा मानसरोवर निकट चेमायुंग दुंग नामक हिमलबाट भएको छ । तिब्बतमा यसलाई यार्लुग छंग्पो सांग्पो नदी भनिन्छ । यो नदी भारतको अरुणाचल प्रदेशमा डिहांग दिहांग नामले चिनिन्छ र आसाम राज्यमा ब्रह्मपुत्र नामले । बंगलादेश पुगेपछि यसलाई जमुना भनिन्छ । यस नदीले दुई हजार नौ सय किमी लामो यात्रा पूरा गर्दछ । यो नदी बंगलादेशमा पुगेपछि गंगा नदीको मूल शाखा पद्मासित मिलेर बंगालको खाडीमा गएर मिसिन्छ ।
हिन्दुहरुको महत्वपूर्ण तीर्थस्थल कैलाश मानोसरोवर, भारतीय तीर्थयात्रुहरुको महत्वपूर्ण धार्मिक गन्तब्य हो । नेपाल भएर कैलाश मानोसरोवर जान भारतीय तीर्थयात्री अथवा तेस्रो मुलुकको पर्यटकका लागि दुईवटा बाटो चलन चल्तीमा छन । तातोपानी र हुम्लाको हिल्सा हुदै । काठमाण्डौंबाट कोदारी मार्ग अर्थात खासाको बाटो भएर जादा करीब दूई हजार २ सय किलोमिटरको दुरीमा कैलाश मानोसरोवर पर्दछ । केहि बर्ष पहिला सम्म कैलास मानसरोवरको यात्रामा जाँदा नेपालबाट कोदारी राजमार्गको तातोपानी हुँदै खासाबाट तिब्बतको न्यालम बजारबाट ब्रम्हपुत्र नदीको तटमा रहेको ब्यापारिक केन्द्रको दोडवा बजार, साँगा बजार हुदै मानसरोवर जाने गर्दथिए । कैलास मानसरोवर जाने त्यो बाटो साह्रै रमणीय छ । दक्षिणतिर लहरै बसेका हिमाली श्रृखला उत्तरतर्फ आश्चर्यजनक पहाडी चुचुरासम्म फाँटमा चरिरहेका भेडा, च्यांग्रा, चौरी, याक, तथा घोडाका बथान मानोसरोवर यात्रामा जाने मानिसहरुले देख्न पाउथे । तर आजभोली भुकम्पको कारणले यो बाटो बन्द भएको छ । जसको कारण यो वर्ष मानसरोवर जानको लागि धेरै मानिसहरुले हुम्लाको हिल्सा र केरुङ नाकाको बाटो जाने गरेका छन ।
नेपालगन्ज–सिमीकोट–हिल्सा हुँदै मानसरोवर पुग्ने भारतीय तीर्थालुलाई कठिनको यात्रा बनेको छ । यो बर्ष धेरै भारतीय नागरिकहरु निजी तबरले हेलिकप्टरको प्रबन्ध गरेर कैलाश मानसरोवर पुगे । ठूलो संख्यामा कैलाश यात्रामा निस्किएका यात्रुले सिमकोट र हिल्सामा खानबस्न समस्या बेहोर्नु प¥यो । पछिल्लो समय छिनछिनमा फेरिने मौसमले हिल्सा–सिमकोटको हेलिकप्टर यात्रा र सिमकोट–नेपालगन्ज हवाई यात्रासमेत प्रभावित भएकोले पनि मानसरोवर जान लागेका मानिसहरुलाई समस्या पर्ने गरेको छ । नेपालगन्ज–सिमकोट हुँदै मानसरोवर पुग्न जति कठिन छ, फर्कन उत्तिकै गाह्रो छ । खासगरी समयमा हवाई जहाज र हेलिकोप्टर नपाउने र हिल्सादेखि मानसरोवरसम्म को हिँडाइ तीर्थाटनका पर्यटकलाई समस्या हुने गरेको छ । सिमीकोट र हिल्सामा पर्यटकलाई बास बस्न पर्याप्त होटलको सुविधा छैन । कैलाश मानसरोवर पुग्न सबैभन्दा नजिकको रुट नेपालगन्ज–सिमकोट–हिल्सा भए पनि पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास नहुँदा समस्या छ ।
धेरै मानिसहरुले कैलाश मानसरोवरका बारेमा जिज्ञासा राख्दछन । चाहे त्यो तीर्थाटनका कारण होस वा हिमाली भेगको भ्रमणका कारण । तीर्थहरुको पनि तीर्थ अर्थात महातीर्थका रुपमा चिनिने कैलाश मानसरोवर यात्रामा कसरी जान सकिन्छ त ? भगवान शिवको धाममा ? मानसरोवर जान अधिकांश मानिसको इच्छा हुन्छ । जसले अठोट गर्छ उसले यात्रा तय गरेरै छोडछ । यात्राप्रति धेरैको जिज्ञासा कसरी जाने होला ? कहाँबाट जाने होला ? तिब्बतमा पर्ने हिमाली क्षेत्र भएकाले कैलाश मानसरोवर यात्रालाई कठिन यात्राको रुपमा लिने गरिन्छ । हिमाली भेगमा जाँदा लेक लाग्नेदेखि बिरामी परिनेसम्मका जोखिम रहन्छन् । मानसरोवरको लामो यात्रा अवधि र विकट क्षेत्र भएकाले खाने–बस्ने र यात्राका लागि चाहिने खर्चसहित आवश्यक सरसामानको जोहो गर्नु पर्दछ । कैलाश मानसरोवर यात्रामा बाक्ला ज्याकेट, टोपी, पञ्जा, ट्राउजर, मोजा, हाइनेक अनिवार्य चाहिन्छ । यस्तै, घामबाट जोगिने खालको शतप्रतिशत यूभी प्रोटेक्टिभ सन ग्लास, सन स्क्रिन, टेक्ने लठ्ठी, पानीको बोतल अनिवार्य लैजानुपर्छ । खानका लागि चकलेट, बदाम, काजु, किसमिस, भुटेको चना, केराउ, चिउरा, जौको सातु, चुइंगमलगायत लैजानु पर्दछ ।
यात्राभरका लागि कम्तिमा पनि दुई जोर जुत्ता आवश्यक पर्छ । गाडीमा यात्रा गर्दासम्म सामान्य प्रकारका जुत्ता लगाउन सकिन्छ भने कैलाशको प्रदक्षिणाका लागि भने राम्रो ट्रेकिङ जुत्ता चाहिन्छ । कमसल जुत्ता भएमा खुट्टा दुखाउने र यात्राकै क्रममा च्यातिने जोखिम हुने भएकाले सकभर राम्रो जुत्ता नै खरिद गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । यात्रामा लैजानु पर्ने सामानको सूची बनाएर मात्र बजारमा किनमेल गर्न जाँदा सामान किन्न भुलिँदैन । यदि सामान किन्न भुलेमा त्यस क्षेत्रमा नपाइने हुँदा यात्रामा निस्कनुअघि किनमेल गर्दा नै ध्यान दिनुपर्छ । यात्रुले आफूले सेवन गरिराखेको नियमित औषधी लैजान भुल्नु हुँदैन । त्यसबाहेक टाउको दुख्दा खाने, पखाला लाग्दा खाने, दुखाई कम गर्ने औषधी साथमा बोक्न बिर्सनु हुँदैन । झण्डु बाम वा भिक्स लैजानु भए राम्रो हुन्छ ।
मानसरोवरको यात्रा संसारका अरु स्थानको यात्रा गरेजस्तो सजिलो छैन । आफूखुशी र जहिले मन लाग्यो तहिले यस यात्रामा जान सकिँदैन । तिब्बतको भौगोलिक बनावट, फरक खाना र भाषा शैलीका कारण ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत जादा सबै भन्दा सजिलो हुन्छ । तिब्बतीले आफ्नो भाषा मात्र बोल्ने हुदा ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत जादा भाषा र अन्यकुराको समेत सजिलो हुन्छ । तिब्बतमा खानेकुरा जहाँ पायो त्यहीं हुँदैन । खाना पाइएमा पनि आफूलाई चाहिने खाना तिब्बती भाषामै माग्नुपर्ने हुन्छ । मानसरोवर पुग्नका लागि ट्रेकिङ एजेन्सी बाहेक पनि अन्य रुडबाट समेत जान सकिन्छ ।
चीनको तिब्बतमा पर्ने कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा प्रत्येक बर्ष हजारौँ तीर्थाटनका पर्यटकले भ्रमण गर्ने गरेका छन । तिब्बतको हिमाली क्षेत्रमा मानसरोवर पर्ने भएकाले यात्रा चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । कैलाश पर्वतलाई परिक्रमा गर्दा ठूलो पुण्य प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । वैशाखदेखि असार कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय मानिन्छ । तर पनि असोज महिनासम्म पनि मानसरोवर जाने तीर्थाटनका पर्यटकहरुको चहलपहल देखिन्छ ।
काठमाडौं–ल्हासा हवाई मार्ग कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि सबैभन्दा सजिलो हुन्छ । यसपछि सडक यात्रामा मानसरोवर पुग्न सकिन्छ । मानसरोवर पुगेको दिन एक रात वास बस्न सकिन्छ वा स्नानपछि कैलाशको आधारशिविर दार्चेनमा वास बस्न सकिन्छ । दार्चेनबाट तीन दिन पैदल वा घोडामा यात्रा गरेपछि कैलाशको प्रदक्षिणा गरी फेरि दार्चेन फर्किन सकिन्छ । दार्चेनबाट फेरि सडक यात्रा गर्दै ल्हासा फर्किन र ल्हासाबाट हवाई मार्गबाट काठमाडौं आउन सकिन्छ ।
हुम्लाको हिल्सा मार्ग
नेपालगञ्ज–सिमिकोट हवाई यात्राबाट शुरु हुन्छ । नेपालगञ्जबाट हुम्लाको सिमिकोटसम्म हवाई जहाजबाट यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस रुटमा हवाई जहाजको टिकट पाउन एकदमै कठिन हुन्छ । छिटो–छिटो मौसम परिवर्तन भइरहने हुँदा उडान ढिलाइ हुने जोखिम जतिबेलै रहन्छ । सिमिकोटबाट हिल्सासम्म हेलिकोप्टर अथवा पैदल यात्रा गर्नु पर्ने हुन्छ । हिल्सा पुगेर नेपालबाट तिब्बती सीमा छिरेलगत्तै सडकबाट एक दिनमा मानसरोवर पुग्न सकिन्छ ।
काठमाडौंबाट रसुवागढी हुँदै केरुङ पुग्नुपर्छ । केरुङबाट तिब्बती सीमा पार गरी सडक यात्रा गर्दै एक दिनमा सिगात्से पुगिन्छ । सिगात्सेबाट मोटरबाट दुई दिनमा मानसरोवर पुग्न सकिन्छ । तिब्बती भेगमा सडकको अवस्था राम्रो रहे पनि नेपालतर्फ नाजुक रहेका कारण यात्रा केही कष्टकर हुन पुग्छ । तर, खर्चका हिसाबले यस रुटबाट यात्रा गर्दा कम खर्चिलो हुन्छ । यस रुटबाट कैलाश मानसरोवर यात्रा दुई लाख रुपैयाँसम्ममा गर्न सकिन्छ ।
मिति २०७५ भाद्र ३ गते दाङ